Pero: Fiainan’ny Indizeny Amazoniana ahiana hopotehin’ny Mpitrandraka Solitany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2011 14:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Português, Dansk, English
Lahatsary fampahafantarana mandritra ny ora iray, mampiseho ny fiainana nentim-paharazana an'ireo mponina ao Amazonia, sy ny fomba fiveloman'izy ireo izay ahiana ho potiky ny fitrandrahana solitany sy ny fambolena zavatra tokana atao loharanon'angovo tahaka ny [solika] menaka voanio.
Ao amin'ny Amazonia, masato o petroleo (Amazonia, masato sa solika) nijery indray mipimaso ny fiainan'i Jairo, ny vadiny Irma ary ny zanany efatra izahay. Nifoha maraina be mba hisotro masato, rano fisotro nentim-paharazana yuca izay zotram-piainan'izy ireo na dia kely aza ny sakafo hafa ahafahan'izy ireo manao ny asany andavanandro: fanjonoana, manatsara ny asa fambolena kely ary ny fihazana.
sary indray mipika tamin'ny horonantsary mihetsika 'Amazonia, masato o petroleo' (Amazonia, Masato sa solika).
Ny renirano sy anaty ala no antom-piveloman'izy ireo ary ankehitriny izay lazain'ny governemanta fa “fampandrosoana” dia ahiana hamotika ny fiainan'izy ireo. Nokapaina ny ala mba hanamboarana lalana, nosolaina ny tendrombohitra ahazoana vato kely atao amin'ny lalana izay natao fotsiny mba ho fivezivezena mankany amin'ny toby misy ny mpitrandraka solitany sy ny fambolena “bio-diesel”.
Nandao ny tanàna avy eo ny mponina ao an-tanàna mba hivelomana satria maina ny helodrano feno trondro ary miraraka avy amin'ny paompy mankany amin'ny renirano ny menaka sy ny solitany, ka mahatonga ny tanimbolin'izy ireo voatondrak'izany, ka tsy misy fotony intsony ny fandrahoana sakafo, sy ny fisotroana rano ary ny fihinana trondro .
Raha tokony ho tahaka ny mariky ny harena ny habetsahan'ny mpitrandraka solitany, dia toa toy ny mariky ny famotehana ny sosialy sy ny kolontsaina, fifindran'aretina, ny aretina ary ny fahatesana indray izany. Ary raha miresaka momba ny mpitrandraka solitany isika, dia handeha hiresaka ihany koa ny bio-diesel sy ny hekitara an'arivorivony izay natokana hambolena ilay lazaina fa angovo azo havaozina nefa diso izany dia ny voanio fakana menaka mba hamokarana lasantsy.
“Amazonia, masato sa mpitrandraka solitany” dia mampiseho ny fijery an'avona ataon'ny fahefana ara-politika sy ara-toekarena ny ala mikitroka sy ny mponina ao aminy, satria ny politika ara-toekarenan'izay ivelomana ihany no tanterahin’ izy ireo ary tsy mpamokatra. Te-hiampanga ny politikan'ny governemanta mamely ny indizeny sy ny mpamboly ary ny mpiompy any an'ala mikitroka izany, fa heveriny ho toy ny olom-pirenena sokajy faharoa ka nobodoina ny tanin'izy ireo, nofitahina ary nafindra hiala amin'ny fiaraha-monina misy azy mba hanomezana ny loharanon-karena ho an'ny orinasa goavana ao an-toerana sy ny orinasa marorantsana, ary hanomezana fahafaham-po ny Takian'ny Fifanarahana Ara-barotra Malalaka miaraka amin'ny Etazonia no tanjona lehibe.
Ny lahatsary famantarana dia mampiseho ihany koa ireo manampahaizana, siantifika sy lohandohan'ny fiarahamonina izay manazava ny fomba niezahan'ireo mponina ao an-tanàna mampahafantra ny zony mba ho ekena sy hajaina, ary koa ny resaka olana ara-pahasalamana ao an-tanànan'ireo mponina noho ny fitrandrahana solitany efa nisy teo aloha.
Notontosain'ny fikambanana Catalan Lliga dels drets dels pobles ny lahatsary ary azo jerena ao amin'ny tranokalan-dahatsary ny vaovao fanampiny momba ny horonantsary, ny vaovao hafa momba ny zon'ny mponina ao an-tanàna koa azo jerena ao amin'ny tranokalan'izy ireo “Mponina ao an-tanàna, Raha Mitsangatsangana ny Tany”